प्रहरीले पाएको त्यो सुराक ! – eSidhakura
मुख्य पृष्ठसमाचारप्रहरीले पाएको त्यो सुराक !
प्रहरीले पाएको त्यो सुराक !
जनकपुरधाम : एक महिनाअघि ओ’छ्या’नबाटै बे’पता भएका झा द’म्पती ज्यूँ’दै भेटिएलान् कि भन्ने परिवारको आशा सकिएको छ। एक महिना देखि बे’प’ता भएका महोत्तरीको पिपरा गाउँपालिका वडा नं. ५ सहोडवाका ६५ वर्षीय मुसा फिर झा र उनकी श्रीमती ६० वर्षीया गीता देवी झाको श,व फे’ला परेसँगै परिवार शो’कमा डु’बेको छ।
बिहीबार महोत्तरीको पिपरा गाउँपालिका वडानं. २ अतरार जानेबाटोमा फेलापरेको श,व झा द’म्पती कै रहेको उनको परिवारले पुष्टि गरेको छ। झा दम्पती बे’पता भएको एक म’हिना बिति सक्दा पनि श,व फेला परेको स्थानमा केहि दिन पहिला मात्र राखिएको हुन सक्ने अनुमान गरिएको छ। निर्माणधिन अवस्थामा रहेको सडकखण्डमा अहिले स्काभेटरले दिनैपिच्छै खन्ने काम गरेको स्थानीयहरुले बताए।
उच्च प्रहरी स्रोतका अनुसार बिहीवार बिहान ९ बजेतिर स्थानीयबाट प्रहरीले गोप्य सूचना पाएका थिए । प्राप्त सूचनाका आधारमा खेतमा नयाँ माटोले पु रि’एको अवस्थामा प्रहरीले उ’त्खनन् गर्दा २वटा बो’रामा छुट्टा छुट्टै श,व गा’डिएको थियो । महोत्तरीको पिपरा गाउँपालिकाकै अतरार नजिक रहेको पुलको नजिक माटो पु’र्ने काम भइरहेको थियो । ट्रयाक्टरले माटो पु’र्ने तथा एक्साभेटरले माटो ख’न्ने काम गरिरहेको अवस्थामा श,व देखिएपछि स्थानीयले प्रहरीलाई खबर गरेका थिए ।
२ नम्बर प्रदेश प्रहरी कार्यालयका प्रहरी प्रमुख समेत रहेका प्रहरी नायब महानिरीक्षक (डीआईजी) धिरजप्रताप सिंहका अनुसार पोखरी जस्तै नयाँ माटो भरिएको खेतमा ५फिट खा’ल्डो खनेर बो’रामा श,व पुरिएको अवस्थामा प्रहरीले निकालेको थियो । श,व छिट्टै ग’लोस् भन्ने उद्देश्यले ४ वटा नूनका प्या’केट समेत राखिएको उनले बताए । यस घ’टनामा जिल्ला प्रहरी कार्यालय महोत्तरी, प्रदेश २ प्रहरी कार्यालय जनकपुर र नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी)को टोली खटेको थियो।
उनीहरुको खोजतलाश कै क्रममा प्रहरीले साना ठूला गरी विभिन्न ५४ वटा पोखरी तथा पानी जमेको खा’ल्डाहरूमा समेत खोजी गरेको थियो । प्रहरीले केही दिन पहिला प्रहरीले सहोडवा कै ५२ वर्षीय रामबाबु यादव र उनका जेठो छोरा २६ वर्षीय सुरेन्द्र यादव, कान्छो छोरा २४ वर्षीय राजेन्द्र यादव तथा भारतको बिहार राज्य मधुवनी जिल्ला, थाना मधुवापुर, ग्राम पंचायत तरैया वडा नं. २ अनदौली घर भइ हाल पिपरा गाउँ पालिका वडा नं.६ बनौली चौक बस्ने ५० वर्षीय हरेन्द्र ठाकु रलाई घ’टनामा सं’लग्न रहेको भन्दै सार्वजनिक गरेको थियो।